बैठक र प्रशिक्षणका लागि ओली-प्रचण्ड प्रदेश दौडाहमा, को कहाँ पुगे ? — Imandarmedia.com
बैठक र प्रशिक्षणका लागि ओली-प्रचण्ड प्रदेश दौडाहमा, को कहाँ पुगे ?
काठमाडाैं । सत्तारुढ नेकपाको प्रदेश कमिटी बैठक तथा प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलाका लागि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै जिल्ला दौडाहमा निस्कने भएका छन् । सातवटै प्रदेशमा कार्यकता भेला, बैठक र प्रशिक्षणका लागि दुवै अध्यक्षहरू जिल्ला दौडाहमा निस्कने भएका हुन् । नेकपाले सातवटै प्रदेशमा छुट्टा–छुट्टै समयमा आयोजना गर्ने कार्यकर्ता भेला, बैठक र प्रशिक्षण कार्यक्रमको कार्ययोजना सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
४ फागुनदेखि २१ फागुनसम्म आयेजना हुने यी कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली र पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड नै सबै प्रदेशका कार्यक्रममा सहभागी हुँदै छन् । सबै प्रदेशमा २-२ दिनसम्मका लागि कार्यक्रम आयोजना गर्ने कार्यक्रममा दवै अध्यक्षसहित केन्द्रीय सचिवालयका नेताहरूसमेत सामेल हुँदैछन् । भेला, बैठक र प्रशीक्षण कार्यक्रमका लागि प्रत्येक प्रदेशमा दुवै अध्यक्ष अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुने छन् भने सचिवालय सदस्यहरूलाई विभिन्न प्रदेशमा प्रशीक्षण कार्यक्रमको जिम्मेवारी दिएको छ ।
प्रदेश– ५ मा कार्यकर्ता भेला आज नै हुँदैछ । यसका लागि प्रचण्ड नेपालगञ्ज पुगिसकेका छन् । अर्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली आइतबार नै गृहजिल्ला भ्रमणको कार्यक्रममा व्यस्त भएकाले बेलुकासम्म नेपालगञ्ज पुग्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयका एक सदस्यले बताए । प्रदेश– ५ मा नेकपाले ५ फागुनमा बैठक आयोजना गर्ने कार्यक्रम छ । सुरञ्जन घिमिरेले नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार लेखेका छन्
दवै अध्यक्षसहित सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महासचिव विष्णु पौडेलले प्रदेश–५ मा प्रशीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । नेकपाले प्रदेश–५ पछि कर्णली प्रदेशमा कार्यक्रम राखेको छ, जहाँ ६ फागुनमा कार्यकर्ता भेला राखिएको छ भने ७ फागुनमा बैठक आयोजना गर्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा दुवै अध्यक्षसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रशिक्षण गराउने भएका छन् ।
यसपछि प्रदेश–२ मा ९ फागुनमा कार्यकता भेला कार्यक्रम राखिएको छ भने १० फागुनमा बैठक राखिएको छ । प्रदेश–२ मा दुवै अध्यक्षसहित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम छ । यस्तै, १२ फागुनमा गण्डकी प्रदेशमा कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्ने भएको छ भने १३ फागुनमा बैठक सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । दुवै अध्यक्षसहित प्रदेश–२ मा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रशिक्षण दिनेछन् ।
प्रदेश– २ पछि नेकपाले बाग्मती प्रदेशमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । बाग्मती प्रदेशमा १५ फागुनमा कार्यकर्ता भेला र १६ फागुनमा बैठक सञ्चालन गर्ने भएको हो ।
बाग्मती प्रदेशमा दुवै अध्यक्षसहित वरिष्ठ नेता मााधवकुमार नेपाल र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले प्रशिक्षण गर्ने तय भएको छ । यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८ फागुनमा कार्यकर्ता भेला र १९ फागुनमा बैठक आयोजना गर्ने भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुवै अध्यक्षसहित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रशिक्षण दिनेछन् ।
नेकपाले कार्यकर्ता भेला, बैठक र प्रशिक्षण कार्यसूचीको अन्तिममा प्रदेश–१ लाई राखेको छ । जसअनुसार प्रदेश– १ मा कार्यकर्ता भेला २० फागुन हुँदैछ भने बैठक २१ फागुनमा हुने भएको छ । यस प्रदेशमा दुवै अध्यक्षसहित सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महासचिव विष्णु पौडेलले प्रशिक्षण दिनेछन् ।